Al-Masry-3-1- Ku Karbaashtey Al-Ahly Galaafateyna Inay Ku Dhintaan Dad Badan
Port Said Stadium-February 1-2012-Saaxiibayaal faaqidaadeena ciyaaraha waxaynu maanta ku falaqeyneynaa ciyaar ka dhacdey magaalada Port Said oo isu badashey dagaal iyo dhimasho badan.
Dalka Masar oo aad iyo loogu xushmeeyo ciyaaraha siiba kubadda cagata taariikhweyna ku leh Aduunka ahna halyeyada qaaradda Afrika ayaa waxaa ka dhacay mucjiso aan waligeed soo marin abid taariikhda wixii fool xumada ahaa ee maanta ka dhacdey Port Said Stadium.
Saaxiibataal waxaa ciyaar xiiso badan iskaga horyimd labada kooxood ee u caansan Masar oo kala ah AL-MASRY oo ka socotey Port Said iyo AL-AHLY oo ka socotey Qahira ciyaartan oo ay soo buuxiyeen dadweyne aad u badan iyo taageerayaasha labada dhinac taas ooo Askar badan lagu soo daadiyey garoonka si amaanka loo sugo.
Haddaba akhyaartay ciyaartan oo ku bilaabantey qaybtii hore degenaan iyo kubad isu dhiibifiican ayaan u ekeen qeybtii dambe tii hore markii Al-Masry 3- 1- Gool ku karbaashtey Al-ahly haddaba maxaa dhacayGarsoorihii markii uu ciyaarta dhameeyey ayaa waxaa isku soo jabey taageerayaashii labada kooxood isku garaacayna kuraas iyo dhagxaan dagaalkaas oo muddu socdey waxay galaaftey iney dad badani ku dhintaan garoonka dhexdiisa.
Askartii waxay fureen albaabkii weynaa ee garoonka si ay u kala badbaadiyaan laakiin sheekadu waxay isu baddeshy iney banaanka hilfaha iskugu qaadaan iskuna garaacaya quraarado,dhagaxyo,mindiyo, iyo bastoladow taas oo boliiskii talo farahoodii ka baxdey waxbana ka qaban kari waayey.
Hadal iyo dhamaantii dadweynihii ciyaartan ka soo qeybgaley waxay cagacgeynayeen 22,000 kana mid ahaayeen 2000 taageerayaasha AL-AHLY foolxumadii halkaa ka dhacdey waxay galaaftey iney ku dhintaan 74,dhaawaca waa 1000 -150-na waa dhaawac halis ah,saaxiibayaal walow aan ahyn siyaasi sheekadan aan hore taariikhda loo arg waxay ku saleysantahay siyaasad.